Waxaan rabaa in aan ogaado sida loo kiciyo tabarucaadka 'Twitch'? ➡️ Raacayaasha ▷ ➡️
Waxaan rabaa in aan ogaado sida loo kiciyo tabarucaadka 'Twitch'?
Waxaa laga yaabaa 6, 2021 0 comments 361
Hawlaha dhaqaalaha Iyagoo adeegsanaya shabakadaha bulshada ayay aad iyo aad u badan yihiin, waxay ka kooban yihiin bixinta adeegyada nadiifinta illaa alaabada suuq geynta ballaaran, halkaas oo aad ka heli karto wax kasta oo waxyaabo ah sida alaabooyin la sharraxay ama gacmo lagu sameeyay Runtu waxay tahay qof kasta oo raba inuu suuq geeyo meel baa u taal.
Madasha laga soo bilaabo Twitch sidoo kale waxaa jira meel loogu talagalay kuwa doonaya inay lacag ku kasbadaan xirfadahooda, iyagoo adduunka u muujinaya waxa ay qabtaan oo awood u leh inay ku gaaraan hiwaayadooda ugu weyn, ciyaaraha fiidiyowga. Haddii cayaartoyda iyo durdurradu ay sidoo kale kasban karaan lacag aad u tiro badan haddii ay yaqaanaan sida loogu horumariyo habka ugu fiican barxadda.
Sidee bay taas u sameeyaan:
Haddii aad la yaabban tahay sida ay suurtogal u tahay in taageerayaasha ciyaarta fiidiyowga ay lacag ku kasbadaan, maxaa yeelay jawaabtu way fududahay, waxay ku sameeyaan tabarucaadka ay raacyadooda ka sameeyaan kanaallada gudbinta ee barxadda, dabcan maya. Waxay ku sameeyaan lacag dhab ah, way sameeyaan oo leh lacag dalwaddii wareegga Twitch.
Sidee tabarucaadka loo hawlgeliyaa:
Lo primero waa inuu noqdaa madal socodsiin firfircoon, markii tan la caddeeyo, waxaan kuu sharxi doonaa habka.
Ku-deeqidda Qaybo (farxad):
Tani waa lacagta rasmiga ah ee dijitaalka ah oo ah barnaamijka 'Twitch application', si aad u awoodo inaad marin u hesho oo aad ku tabarucdo waa inaad noqotaa mid gacansaar la leh barxadda, markaa ku deeqaha waa waxoogaa ka sii adag sidii aad u maleyn lahayd. Waa kuwan dhowr ikhtiyaar oo sidaas lagu sameeyo.
Iyadoo loo marayo barnaamijka:
Isticmaalayaasha cusub ee boggan, Twitch ayaa u oggolaanaya iyaga ikhtiyaarka ay ku heli karaan xoogaa yar si toos ah, waqtiga rukunka.
Qaybtani waxay ku yaalli kartaa ikhtiyaarka ah Qalabaynta kaas oo isna ku yaal desktop-ka arjiga.
Marka xulashada qaabeynta la doorto, xulo qaybta xiriirka isla markaana tan waxaad ka heli doontaa sheyga kuu oggolaan doona inaad awood u yeelatid jajabyada.
Qof kasta oo raacsan ayaa laga yaabaa u isticmaal bogaadan marinka aad ka hesho ee aad ka hesho adoo garaacaya farxadaha iyo tirada jajabyada aad rabto inaad ugu tabarucdo koontada.
Hab kale oo lagu helo deeqaha waxaa loogu talagalay codsiga PayPal, taas oo ay heli karaan dad badan, xaaladdan waa qofka qaata tabarucaadka waa inuu u sheegaa kuwa raacsan inay ku soo diraan tabarucaadka emailka ku xiran koontada PayPal.
Waxaad sidoo kale sameyn kartaa qaabeynta koontada PayPal.me halkaas oo kuwa raacsan ay ku deeqi doonaan tabarucaadkooda si fudud oo toos ah. Kaas oo loo qaabeeyey sida soo socota:
Af ahaan tilmaama nidaamka cinwaanka koontada aad ka heli doonto deeqaha.
Waxaad leedahay dadweynaha xiriiriyaha koontada ku jirta astaanta kanaalkaaga, waa habka ugu badan ee lagula taliyo, maadaama ay ka soo jiidasho badan tahay kuwa raacsan oo muujisay waxqabad sare.
Qaybta "Tafatir darbiyada" Waad ku dari kartaa qaybta qaadashada tabarucaadka barta 'Twitch', waxaad u baahan tahay oo keliya macluumaadka uu nidaamka codsado.
1 Sidee bay taas u sameeyaan:
2 Sidee tabarucaadka loo hawlgeliyaa:
3 Ku-deeqidda Qaybo (farxad):
4 Iyadoo loo marayo barnaamijka:
5 By Paypal:
Sida loo ogaado kooxaha aad isku wada tihiin ee Telegram